Nhau - Chokwadi Nezve Biodegradable Plastiki
1. Chii chinonzi degradable plastiki?
Mapurasitiki anodonhedzwa ipfungwa hombe. Inguva yenguva uye ine nhanho imwe kana kupfuura pasi pemamiriro ezvinhu akanangana nezvakatipoteredza, zvichikonzera shanduko yakakura mumakemikari mamiriro echinhu, kurasikirwa kwezvimwe zvinhu (sekuvimbika, mamorekuru, chimiro kana simba remuchina) uye / kana kutyoka mapurasitiki.
2. Chii chinonzi biodegradable plastiki?
Mapurasitiki anogadzirwa nehutachiona mapurasitiki anogona kuora nekuita kwezvinhu zvipenyu, kazhinji hutachiona, kupinda mumvura, carbon dioxide, uye biomass. Mapurasitiki anogadzirwa nehutachiona anowanzo gadzirwa nemidziyo inogadziriswazve, zvidiki-zvipuka, petrochemicals, kana mubatanidzwa wezvose zviri zvitatu.
3. Chii chinonzi zvinhu zvinogadzirwa nemafuta?
Zvishandiso zvinogadzirwa nehufa zvinosanganisira biodegradable zvakasikwa polymer zvinhu senge cellulose, starch, bepa, nezvimwewo, pamwe nepurasitiki inogadzirwa nehuhu yakawanikwa ne bio-synthesis kana kemikari synthesis.
Biodegradable plastiki inoreva mineralized inorganic munyu uye nyowani nyowani (senge microbial mitumbi, nezvimwewo) iyo kudzikisira kwayo kunonyanya kukonzereswa nekuita kwema microorganism mune zvakasikwa pasi pechisikigo mamiriro akaita sevhu uye / kana jecha, uye / kana mamwe mamiriro akadai composting mamiriro kana anaerobic kugaya kana mune aqueous tsika mvura, iyo inozopedzisira yadzvinyirirwa zvachose kuita carbon dioxide (CO2) kana / uye methane (CH4), mvura (H2O) uye yezvinhu zvirimo.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mhando dzese dzezvinhu zvinogadziriswa zvigadzirwa, kusanganisira bepa, zvinoda mamwe mamiriro ezvakatipoteredza nekudzora kwayo. Kana isina mamiriro ekudzikisira, kunyanya mamiriro ehupenyu hwehutachiona, kuora kwayo kunenge kuri kunonoka; panguva imwecheteyo, kwete ese marudzi ese ezvigadzirwa zvekushomeka anogona kukurumidza kudzikisira pasi pechero mamiriro ezvakatipoteredza. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kuti tione kana chinhu chichigadziriswa kubva pakuongorora mamiriro ezvakatipoteredza uye kuongorora chimiro chechinhu icho pachacho.
4. Mhando dzakasiyana dzemapurasitiki anogadziriswa zvigadzirwa
Zvinoenderana nerudzii rwezvinhu mbishi zvinoshandiswa, biodegradable plastiki inogona kugoverwa muzvikamu zvina. Chikamu chekutanga ipurasitiki inogadziriswa zvakananga kubva kuzvinhu zvakasikwa. Pamusika pari zvino, biodegradable plastiki, iyo inogadzirwa nema natural polymers anonyanya kusanganisira thermoplastic starch, biocellulose uye polysaccharides nezvimwe; Chikamu chechipiri polymer inowanikwa ne microbial Fermentation uye kemikari synthesis, senge polylactic acid (PLA), nezvimwe; Chikamu chechitatu chiri polymer, iyo inogadzirwa zvakananga ne microorganism zvinhu, senge polyhydroxyalkanoate (PHA), nezvimwe; Chikamu chechina ipurasitiki inogadziriswa inogadziriswa nekusanganisa zvinhu zvambotaurwa kana nekuwedzera mamwe makemikari ekugadzira.